Kooxda Juventus oo ku qammaaraysa xiddig muhiim ah si ay u soo qaadato laacibka Man City ee Gabriel Jesus – Gool FM
(Turin) 04 Abril 2020. Kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa si aad ah u baacsanaysa saxiixa laacibka kooxda Manchester City ee Gabriel Jesus, xilli wakiilka laacibkan uu macquul ka dhigay suuro-galnimada uu lacibkan kaga mid noqon xagaagan kooxda Juve.
Kooxda horyaalka Talyaaniga difaacanaysa ayaa lagu soo warramayaa inay u bandhigayso dhiggeeda Man City ciyaaryahanka garabka ka ciyaara ee Douglas Costa si uu qayb kaga noqdo qorshaha ay ku soo qaadanayaan Jesus.
Bianconeri ayaa doonaysa in xiddiga Man City ay beddel kaga dhigto Gonazalo Higuain oo waqti adag ku jira, haddana shabaqa gaarsiiyay kaliya shan gool kulamadii xilli ciyaareedkan Serie A uu ka ciyaaray.
Jariiradda kasoo baxda Taliyaaniga ee Calciomercato ayaa qoreysa in Juve ay kalsooni badan ku qabto in kooxda reer England ay aqbali doonto dalabka uu qaybta ka yahay Douglas Costa.
29-sano jirka reer Brazil ayaa xilli ciyaareedkan waxaa haraadiyay dhaawacyo kala duwan taasoo keentay in kaliya 18 kulan oo u ciyaaro kooxda Maurizio Sarri, waxaana uu dhaliyay kaliya labo gool, isagoo shan kale caawiyay.